Ilegharị Anya n’Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Brazil
Olee oge i kwesịrị irute n’ụbọchị ị chọrọ ịbịa legharịa anya? Iji hụ na ị malitere n’oge legharịwa anya, biko abịala ihe karịrị nkeji iri atọ tupu oge i kwuru na ị ga-achọ ịmalite ilegharị anya eruo.
Ha na-ebipụta ọtụtụ narị nde akwụkwọ, broshọ na traktị n’ihe karịrị asụsụ otu narị na iri abụọ kwa afọ.
Ebe Mmadụ Ga-eji Aka Ya Legharịa Anya
Baịbụl na Onye E Dere Uche Ya na Ya. Ihe ị ga-ahụ ebe a bụ otú Baịbụl si rute anyị aka, nakwa otú Chineke si chebe ihe e dere na ya n’agbanyeghị mbọ ndị na-agba Baịbụl ụkwụ gbara iji hụ na ha gbanwere ihe e dere na ya.
Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Brazil